Waa maxay faa'iidooyinka iibsiga macaamiisha YouTube?
Waxay ku dhiirigelisaa kuwa kale inay iska diiwaangeliyaan kanaalkaaga
Macaamiilku wuu dhegi doonaa oo lama saari doono
Bixin aamin ah oo la hubo
Natiijooyinka waxay bilaabmaan saacadaha 24-72
Ka hel meelkasta oo ka timaada macaamiisha 10-100 maalin kasta
Waxaan had iyo jeer keennaa wax ka badan inta aad ku amartay!
Sababaha ugu sarreeya ee ay tahay inaad ku fikirto iibsashada macaamiisha YouTube
Ma doonaysaa inaad noqoto YouTuber? YouTube waa xarun bulsho iyo dhacdo caalami ah oo soo jiidata balaayiin daawadayaasha aduunka oo dhan. Haddi aad tahay ganacsi dhisan, bilow ama aad rabto in aad soo bandhigto kartidaada, YouTube waa goobta ugu fiican ee lagu gaadho yoolalka suuqgeyneed.
Inaad noqoto YouTuber guuleysta waxay ku lug yeelan doontaa dhisidda saldhigga macaamiishaada iyo helitaanka tiro badan oo saamiyo, jecel, iyo faallooyin. In kasta oo cabbirrada sida saami-qaybsiga, muuqaallada muuqaalka, iyo faallooyinka ay muhiim yihiin, kordhinta tirada macaamiishaada ayaa aad uga sii muhiimsan.
Abuuritaanka waxyaabo tayo leh ayaa ku caawin doona, laakiin fiidyahaaga waxa lagu aasi karaa malaayiin la mid ah - ama ka wanaagsan -fiidyowyada la soo geliyo maalin kasta YouTube. Si sax ah loo dhigo, in ka badan 500 saacadood oo muuqaal muuqaal ah ayaa la shubaa daqiiqad kasta, hal bilyan oo saacadood oo xog ah ayaa laga daawadaa YouTube maalin kasta.
Habka ugu dhakhsaha badan ee lagu kordhin karo tirada macaamiishaada waa in iibsato macaamiisha YouTube Ka socota shirkad caan ah oo adeeg suuq geyn ah oo YouTube ah.
Halkan waxaa ah muuqaal dhow oo ku saabsan waxa YouTube ka dhigaya aalad suuqgeyn caan ah iyo sababaha ugu sarreeya ee ay tahay inaad iibsato macaamiisha.
Maxaa YouTube ka dhigaya aalad suuqgeyn caan ah?
Sahan ay samaysay xarunta cilmi baadhista ee Pew 2021 ayaa daaha ka qaaday in Youtube uu yahay goobta ugu caansan Maraykanka, iyadoo inta badan dadka Maraykanku ay ka door bidaan kanaalada kale.
Laga soo bilaabo 2005 markii la bilaabay, YouTube waxay aasaastay joogitaan xooggan oo ku baahsan boqollaal waddan oo adduunka ah, oo daboolaya 95% dadka internetka ee adduunka.
Waa kuwan qaar ka mid ah xaqiiqooyinka iyo tirooyinka la yaabka leh ee SEM Rush oo muujinaya sababta YouTube u tahay doorashada cad ee suuqgeynayaasha:
YouTube hadda waxay haysataa 2 bilyan oo isticmaale bishii adduunka oo dhan.
Shan bilyan oo fiidiyoow ah ayaa YouTube-ka laga daawadaa maalin kasta taasoo u tarjumeysa hal bilyan oo saacadood oo isticmaalka nuxurka muuqaalka ah maalintii.
74 boqolkiiba dadka waaweyn ee Mareykanka waxay daawadaan fiidiyowyada YouTube.
Daawadeyaashu waxay celcelis ahaan ku qaataan afartan daqiiqo fiidiyowyada YouTube.
Marka la gaaro 2022, qiyaastii 210 milyan oo qof ayaa ku daawan doona fiidiyowyada YouTube gudaha Mareykanka
Marka laga reebo Millennials-ka, tirakoobka sida ugu dhaqsaha badan u koraya waxaa ka mid ah 50 ilaa 65-sano jir (Boomers Baby) iyo 36- ilaa 49-jirrada (Generation X).
Sannadka 2019, 2 bilyan oo qof oo adduunka oo dhan ah ayaa soo galay oo daawaday hal bilyan oo saacadood oo fiidiyow YouTube ah maalin kasta.
YouTube waxay ku xisaabtantaa rubuc ka mid ah taraafikada fiidyaha ee aduunka, oo ka xigta kaliya Netflix.
Marka laga reebo madadaalada, dadku waxay daawadaan fiidiyowyada YouTube si ay u helaan warar, macluumaad, xoojinta shaqada xirfadda, oo ay raacaan shirkadaha iyo noocyada.
Lix ka mid ah tobankii qofba waxay door bidaan inay fiidiyowyada ka daawataan TV toos ah
Sababaha ugu sarreeya ee lagu iibsado macaamiisha YouTube
Caan ka hel
YouTube shaki la'aan waa mid ka mid ah aaladaha ugu fiican ee lagu soo bandhigo kartidaada ama lagu faafiyo wacyiga shaqadaada. 'YouTubers' ee ku guulaystay waa qaar ka mid ah dadka intarneedka ugu caansan adduunka. Haddi ay soo dhigayaan fiidyaha ciyaaraha, vlogska safarka, ama 'sida loo' muuqaalo, YouTubers-kan caanka ah waxa ay dhisteen astaantooda oo ku soo bandhigaan farsamadooda YouTube. Talaabada ugu horeysa ee aad ku noqonayso YouTuber-ka guulaystay waa in aad caan ka hesho
Qaybaha fiidyaha ee ugu caansan YouTube waa:
Dib u eegista alaabada - Ilaa 2017, daawadayaasha YouTube waxay daawadeen 50,000 oo lagu daray sanado fiidiyoow ah oo dib u eegista alaabada ee aaladaha mobilada. Dib u eegisyada la aamini karo ayaa door muhiim ah ka ciyaara dhiirigelinta macaamiisha si ay wax u iibsadaan. Fiidiyowyada dib u eegista badeecada waxay u ogolaataa daawadayaasha inay arkaan waxqabadka badeecada oo ay jawaab celin ka helaan dib u eegista.
Fureyaasha fiidiyaha - Fiidiyowyada feerka-fududku waxay noqdeen saameyn weyn oo ku saabsan go'aamada iibsashada daawadayaasha. Waxay sidoo kale yihiin hab wax ku ool ah oo summaduhu ku faafiyaan wacyiga alaabadooda ama adeegyadooda cusub.
Fiidiyowga Waxbarashada - Daawadeyaashu waxay jecel yihiin fiidiyowyada YouTube ee ku saabsan isbeddellada moodada, farshaxanka muuqaalka, taariikhda, xisaabta, ganacsiga, iyo mowduucyo kale.
Cayaaraha fiidiyowyada - Laga soo bilaabo 'Challenge Highlighter' ilaa "Foll and random facts about me," sumad iyo tartan fiidiyowyadu aad bay caan u yihiin. Qaab muuqalkan waxa uu ku dhiiri galinayaa isticmaalayaasha in ay daawadaan hal-abuurayaashu siyaalo gaar ah u samaynaya caqabada
comedy Fiidiyowyada majaajilada ah ayaa ka mid ah qaababka fursadda sare u leh inay gaaraan heerka 'viral'.
ciyaaraha - Laga soo bilaabo 'Minecraft' ilaa 'League of Legends', fiidiyowyada ciyaaraha waa qayb caan ka ah YouTube.
Vlogs - Vlogs ama baloogyada fiidiyowgu waxay u oggolaanayaan taageerayaasha inay arkaan 'dhabta' adiga oo kugula xidhmaan. vloggers sare waxay caadi ahaan leeyihiin malaayiin macaamiil ah.
Xitaa marka aad sameyso muuqaal tayo sare leh oo ku yaal niche-kaaga oo aad dhejiso, ma jirto dammaanad qaadka guusha degdega ah. Waxa laga yaabaa inay u ekaato sida fayraska Youtubers ay leeyihiin sir, qaacido sixir ah oo caannimada internetka degdegga ah. Waxay si fudud u duubaan muuqaal iyo dhajin, iyo malaayiin aragtiyo iyo macaamiisha ayaa raacda. Iyadoo tani laga yaabo inay u shaqeyso dadka caanka ah iyo kanaalada caanka ah, kuwa bilawga ah waxay u baahan doonaan inay kor u qaadaan xawaaraha iyagoo iibsanaya macaamiisha YouTube.
Fiidiyowga YouTube waxaa loo tixgeliyaa "wanaagsan" haddii uu leeyahay CTR (qiimaha riix-riix) ee ka badan 10 boqolkiiba, 50 boqolkiiba haynta, iyo afar daqiiqo ee celceliska wakhtiga daawashada.
Qiimaha Click-through ama CTR waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo loo qaybinayo tirada dhagsiimada fiidyahaaga aragtiyo thumbnail ah (video teaser). Tusaale ahaan, haddii thumbnail-kaaga fiidyaha la daawado 1,00 jeer oo 10 qof ay gujiyaan muuqaalka, heerka gujintu waa boqolkiiba 10.
Inta badan tirada macaamiishu akoontiga YouTube, way fiicnaan doontaa fursadaha kor loogu qaadayo CTR, sii hayn, iyo wakhtiga daawashada.
Marka loo eego qiyaasta, waxay ku qaadan kartaa ku dhawaad ​​laba sano inaad ka hesho kunkaaga macaamiisha ugu horreeya YouTube. Tani waxay noqon kartaa waayo-aragnimo aad u gaabis ah oo niyad-jab leh dadka raadinaya inay si dhakhso ah u sameeyaan calaamadahooda kanaalka.
Markaad iibsato macaamiisha YouTube, waxaad dhisi kartaa oo aad joogteyn kartaa xawaaraha. Iibka macaamiisha YouTube waxay sidoo kale fariin u diri doontaa isticmaalayaasha kale ee YouTube in macluumaadkaagu yahay mid caan ah oo qiimo leh.
Marka tirinta macaamiishaadu korodho, waxay soo jiidan doontaa dad badan oo badan si ay u eegaan fiidyowgaaga oo ay u ruqaansadaan kanaalkaaga.
Tag mobilka si aad u balaariso gaadhistaada
Ma haysaa istaraatijiyad suuqgeynta kanaalka badan? Suuqgeynta mobilada waa istaraatijiyad suuqgeyn dhijitaal ah oo loogu talagalay in lagu gaaro dhageystayaasha aaladaha mobilada, oo ay ku jiraan tablets iyo taleefannada casriga ah. Statista waxa ay ku qiyaastay in ay jiraan 290 milyan oo Maraykan ah oo isticmaala talefanka gacanta sanadka 2020 ilaa hadda. Marka la eego soo galitaanka taleefannada casriga ah ee boqolkiiba 79.10, Maraykanku waa kan afraad ee adduunka marka la eego milkiilayaasha taleefannada gacanta.
Iyadoo macaamiishu ay dareenkooda u wareejinayaan aaladaha mobilada, suuqeeyayaashu waxay mudnaan siinayaan ka qaybgalka omnichannel ee dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah ee suuqgeynta mobilada. Suuqgeynta moobilka waxaa ka mid noqon kara dirida fariimaha astaanta ah SMS ama wicitaano qabow. Xeeladahan suuq-geynta riixaya waxay leeyihiin cillado fog iyo kuwo gaaban labadaba. Macaamiisha ayaa si fudud u xannibi kara wicitaanada oo ay riixi karaan xayeysiisyada. Suuqgeeyayaasha, la socodka soo noqoshada maalgashiga iyo beegsiga saldhig macaamiil gaar ah ayaa ku adkaata suuq-geynta riixitaanka.
YouTube ayaa si fiican ugu habboon soo galitaanka ama jiida habka suuq-geynta ee aaladaha mobilada. Iyada oo loo marayo suuq-geynta gudaha, calaamaduhu waxay ka hawlgeli karaan oo ku martiqaadi karaan macaamiishooda bartilmaameedka ah oo ay dhisi karaan xiriirro xooggan.
Tirooyinkan HubSpot waxay muujinayaan sababta YouTube u tahay doorashada saxda ah ee suuqgeynta mobilada:
Inta badan dadka waaweyn (75 boqolkiiba) waxay ku daawadaan fiidiyowyada YouTube-ka aaladahooda moobiilka.
YouTube waxay ku gaadhaa dad badan oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 49 aaladaha mobilada usbuuc gudihii marka la barbar dhigo shabakad kasta oo fiilada.
In ka badan afar-meeloodba saddex meelood wakhtiga daawashada YouTube waxay ku jirtaa aaladaha mobilada.
Daraasad Google ah ayaa muujisay in isticmaaleyaasha taleefannada casriga ah ay 1.4 jeer uga dhowdahay inay u fiirsadaan waxyaabaha summadaha leh ama xayeysiiska YouTube.
Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale ogaadeen in daawadayaasha casriga ah ee casriga ah ay aad ugu dhow yihiin inay dareemaan inay ku xiran yihiin noocyada bixiya macluumaadka fiidiyooga ee qalabka mobile marka la barbardhigo daawadayaasha TV-ga. Waxaas oo dhan ka sarreeya, daraasad 2020 ah ayaa muujisay in 70 boqolkiiba daawadayaasha ay iibsadeen ka dib markay arkeen muuqaalka astaanta YouTube.
Ficilada kale ee daawadayaasha ay qaadaan ka dib daawashada fiidyaha summadaysan ee aaladahooda gacanta waxaa ka mid ah:
Booqo shabakada ama dukaanka sumadda
Kala hadal calaamadda dadka kale.
Si qumman u beddel ra'yigooda ku saabsan summada, adeegga, ama alaabta.
La wadaag macluumaadka summadaysan ee ku saabsan adeegga, badeecada, ama shirkadda
Habka ugu wanagsan ee loo abuuro istaraatijiyad suuqgeynta mobilada oo guuleysta waa in la abuuro muuqaalo sumadeedka YouTube oo kor loogu qaado dhegaystayaal balaadhan adoo iibsanaya macaamiisha YouTube. Dadku waxay isha ku hayaan tilmaamo ay ku go'aansadaan waxa laga daawado baraha bulshada iyo nooca nuxurka u qalma waqtigooda. Haddii akoonkaaga YouTube uu leeyahay kumanaan macaamiil ah, waxay u taagan tahay akoon sumcad leh oo dad badani la socdaan.
Kaabi dadaalkaaga suuqgeyneed
Summadaha, haysashada istaraatijiyad suuqgeyneed YouTube waa mudnaanta koowaad. Fiidiyowyada soo jiidashada leh waxay gacan ka geystaan ​​​​kor u qaadida xusuusta sumadda iyo dib u soo celinta sababtoo ah muuqaallada si dhakhso leh ayaa looga shaqeeyaa marka la barbardhigo fariimaha qoraalka ah. Fiidiyowyada YouTube waxay sidoo kale ka caawin karaan ganacsigaaga inuu u wado taraafikada boggaaga ama dukaanka e-commerce, kordhinta beddelka iyo inuu gaaro saldhig dhegeyste oo ballaadhan. Lahaanshaha joogitaanka YouTube waxay sidoo kale u sahlaysaa dhagaystayaasha bartilmaameedka ah inay kaa helaan matoorada raadinta. Waxaad ku baahin kartaa dhacdo toos ah Youtube-ka si toos ah. Tani waxay u soo bandhigaysaa summadaada iyo alaabtaada ama adeeggaaga dhegaystayaal ballaadhan si kharash-ku-ool ah.
Istaraatiijiyadaada suuqgeyneed ee YouTube waxay leedahay fursad sare oo ay ku siiso natiijooyinka la rabo marka aad leedahay saldhig macaamiil xoog leh.
Iibka liiska macaamiisha YouTube waa hab fiican oo lagu kabo dadaalkaaga suuqgeynta YouTube. Waxa ay kaa caawinaysaa in aad dhawaan hesho taageerayaal cusub oo aad heshid likes, comments and shares Macaamiilayaal badan, waxaad dhisi kartaa liis iimaylo ballaaran oo door muhiim ah ka ciyaara kordhinta beddelka iyo ka-qaybgalka.
Liistada macaamiishu waxay ku siinaysaa tilmaamo diirran oo aad ka faa'iidaysan karto la socodka, ka qaybgalka oo aakhirka u beddeli karto macaamiisha. Tirada macaamiisha YouTube waa mid ka mid ah qodobbada darajada muhiimka ah. Iibka macaamiisha firfircoon ee YouTube waxay ka caawisaa ganacsigaaga inuu helo aqoonsi dheeraad ah. Markasta oo ay bataan tirada macaamiishu, way sii xoogaysanaysaa sumcadaada iyo kalsoonidaada taas oo soo jiidan karta macaamiil badan oo organic ah kanaalkaaga.
Wax badan kasso
Mid ka mid ah sababaha ay dad badani u bilaabaan kanaalka YouTube waa inay lacag sameeyaan. Tirada kanaalada YouTube ee kasbaya lix tirooyin sannadkii ayaa kor u kacay 40 boqolkiiba sannad kasta halka kanaalada helay $10,000 sannadkii ay kordheen 50 boqolkiiba.
YouTubers badan oo guulaystay ayaa YouTube ka kasbaday dakhli lix tiro ah. Tusaale ahaan, maaliyadda gaarka ah ee YouTuber Nate O'Brien waxay leedahay 1.1 milyan oo macaamiil ah waxayna kasbatay $444,000 dakhliga xayaysiinta sanadkii. Xiddigaha ugu sarreeya YouTube sida PewDiePie iyo Smosh waxay kasbadaan meel kasta $8.5 milyan ilaa $12 milyan.
Si aad lacag uga bilowdo YouTube, waxaad u baahan doontaa inaad lahaato ugu yaraan kun macaamiil laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay iyo sidoo kale 4000 oo saacadood oo daawasho dadweyne. Markaad hesho macaamiishooda badan, waxaad noqonaysaa mid u qalma barnaamijka Partner ee YouTube bixiso. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad dakhli ka hesho isdiiwaangelinta, xayaysiisyada, iibinta badeecadaha, iyo xubinnimada kanaalka.
Most Google: Iskaashigu wuxuu ku siinayaa qalab kuu ogolaanaya inaad ka shaqeysiiso fiidiyowyadaada Google AdSense. Inta badan dadka caanka ah ee YouTube waxay dakhligoodu ka helaan Google AdSense. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay 1,000,000 macaamiil ah oo daawada laba fiidiyowyadaada ah usbuuc gudihii, waxaad AdSense ka heli kartaa ilaa $36,000 oo keliya.
Qiyaastii, 20,000 oo aragtiyo maalintii ayaa kaa caawin kara inaad hesho inta u dhaxaysa $28 ilaa $47 maalintii celcelis ahaan, iyada oo dakhliga bishii ahi yahay $460 ilaa $769. Haddii tirada aragtiyada maalintii ay joogto, waxaad heli kartaa $5,600 ilaa $9,353 sanadkii.
Iibka alaabta: Wada-hawlgalayaasha YouTube waxay iibin karaan laba iyo toban shay oo badeecooyin ah iyagoo awood u siinaya sifadan akoontada YouTube. Qaar ka mid ah dadka caanka ah ayaa sameeyay malaayiin badeecado ah oo ay ka iibinayaan taageerayaashooda. PewDiePie, oo ah xidigta ciyaarta-fiidiyowga ee Iswidhishka, waxa ay 98 milyan oo macaamiil ah ku leedahay YouTube-ka waxaanay ka samaysaa $6.8 milyan bishiiba iibinta badeecadaha. Waxa kale oo aad ku xayeysiin kartaa badeecadaada/alaabtaada kanaalkaaga.
Xiriirinta kanaalka: Marka aad ka hesho 1000 macaamiil ah kanaalkaaga YouTube, waxaad sidoo kale ku kasban kartaa lacag adiga oo awood u siinaya xubinnimada kanaalka akoonkaaga. Kuwa raacsan iyo taageerayaashu waxay bixiyaan lacag-bixinno bille ah si ay u helaan macluumaad gunno ah, oo ay ku jiraan sheekeysi toos ah, muuqaallo gaar ah, iyo calaamado. Fiidiyowga ugu sarreeya YouTube-ka waxay kasbadaan $40,000 bishiiba xubinimada kanaalka.
Suuq-geynta suuqa: Iyada oo ku xidhan niche-kaaga, waxa kale oo aad ku kala duwanaan kartaa ilahaaga dakhli-ururinta suuqgeyn la xidhiidha, kafaalaqaadyada, iyo koorsooyinka khadka tooska ah. Ganacsiyadu waxay ku bixiyaan YouTubers qadar wanaagsan oo soo socda si ay ugu xayeysiiyaan sumaddooda ama badeecadooda kanaalka. Abuurayaasha caanka ah ee YouTube ayaa si isku mid ah, hadaysan wax ku ool u lahayn kor u qaadista wacyiga sumadda marka la barbar dhigo kuwa caanka ah iyo saameeyayaasha. Saamaynayaasha YouTube waxay caadiyan amraan qiimayaal sare si ay kor ugu qaadaan summada marka la barbar dhigo qoraallada Instagram-ka. Waxaad heli kartaa $2000 muuqaalkiiba haddii aad leedahay 100k macaamiil
Sida laga soo xigtay daraasadda, saameeyayaasha heerka dhexe ayaa ka qaadaya $2,000 100,000 oo macaamiil ah si ay ugu xayeysiiyaan astaanta akoonkooda YouTube.
Soo jiitaan macaamiisha dhabta ah
Suuqgeeyayaashu waxay ka faa'iidaystaan ​​waxa loo yaqaan 'maskaxda adhiga' si ay kor ugu qaadaan iibka iyo ka-qaybgalka. Maskaxda daaqsinka waxaa loola jeedaa sida dadka ay u saameeyaan dadka kale inay wax qabtaan sababtoo ah dadka intooda badan ayaa samaynaya.
Xayawaanka bulsheed ahaan, waxaan ku tiirsannahay macluumaadka dadka kale si aan go'aanno u gaarno. Laga soo bilaabo doorashada xirfadda, u janjeedha siyaasadeed ilaa dharka, rabitaankeena waxaa sida caadiga ah qaabeeya indho-indheyntayada bulsheed. Cilmi-nafsiga cilminafsiyeedka ayaa daraasad ku sameeyay sida xeeladaha barashada bulshadu u qaabeeyaan garaadka wadajirka ah ee bini'aadamka.
Waxa ay ogaadeen in dadku ay u janjeeraan in ay koobiyeeyaan dadka kale, iyo inta tirada dadka ee door gaar ah sameeyay, dadka kale ayaa koobiyeeyay. Tani waa si la mid ah sida ay dadku u doortaan apps ku saleysan tirooyinka soo dejinta ama raacaan akoonnada warbaahinta bulshada ee leh taageerayaal badan. Waxa kale oo run ah in marka dadku raadiyaan oo ay helaan muuqaal leh macaamiil badan, aragtiyo, iyo kuwo jecel, waxay go'aansadaan inay raacaan muuqaalkaas. Marka daawadayaasha ay arkaan in fiidyowgu gaadhistiisu hoosayso, waxay u maleeyaan in waxa ku jira aanay mudnayn in la daawado. Waxa laga yaabaa inay si dhakhso ah u dhaqaaqaan oo ay ka raadiyaan muuqaal la mid ah kanaalka YouTube ee caanka ah kaas oo leh daawasho badan.
Macaamiisha la'aanta kanaalkaaga YouTube waxay sidoo kale hoos u dhigi doontaa fursadaha uu fiidyowgaagu ku heli karo likes, faallooyinka, ama shareecada maaddaama daawadayaasha aysan hubin inay tahay ilo xog ah oo la aamini karo iyo in kale. Markaad bixiso macaamiisha, waxaad hagaajin doontaa fursadaha dadka kale inay noqdaan kuwa raacsan iyo macaamiisha si fudud sababtoo ah 'maskaxda xoolaha'.
Is dhig naftaada maamul ahaan
Mid ka mid ah sababaha muhiimka ah ee lagu iibsado macaamiisha YouTube waa in kor loo qaado awoodda summadaada/summadaada gaarka ah. Lahaanshaha macaamiil badan oo ku jira kanaalkaaga YouTube waxay calaamad u tahay inaad tahay ciyaaryahan halis ah oo ku jira niche marka loo eego tiro yar oo macaamiisha ah. Sida kor lagu iftiimiyay, macaamiil weyn ayaa kuu furaya fursadaha aad lacag badan ku samayn karto, la kaashato xirfadlayaasha kale iyo saameeyayaasha.
Marka loo eego daraasadda 2019 ee SEM rush, 48 boqolkiiba dadku waxay aaminsan yihiin in YouTube ay noqon doonto ka qaybqaataha ugu sarreeya si kor loogu qaado waxtarka isgaarsiinta dadweynaha shanta sano ee soo socota. Haddi nichegu ku jiro PR, moodada, daryeelka maqaarka, dhaqaalaha, ciyaaraha, ama majaajilada, helista macaamiil badan YouTube waxay kaa caawin kartaa inaad naftaada u dhisto khabiir dhanka warshadaha ah.
Iska yaree dadaalka
Macaamiisha ayaa door muhiim ah ka ciyaara guushaada YouTuber ahaan. Laga bilaabo fursadaha lacag-ururinta, fidinta gaadhista, helitaanka caannimada isku xidhka, tiro badan oo macaamiisha ah ayaa bixiya faa'iidooyin badan. Ku-soo-galeyaasha cusub ee goobta, helidda macaamiisheeda iyo dhisidda kalsoonida waxay noqon kartaa caqabad. Waxay u baahan tahay dadaal joogto ah inta aad waqti qaadanayso si aad u kasbato 1000 taageere ee kuugu horreeya. Sida daraasaddu muujinayso, waxay qaadan kartaa ilaa laba sano in la helo kun macmiil.
Kobcinta tirada macaamiisha YouTube waxay ku lug yeelan kartaa fiiro gaar ah u leh tayada muuqaalka, soo noqnoqoshada soo dejinta, hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) si kor loogu qaado qiimeynta goobidda fiidyaha iyo xeeladaha kale. In kasta oo dadaalladani ay lama huraan yihiin, waxaad u baahan doontaa inaad waqti badan u hurto si aad u hesho dhammaan dhinacyada fiidyahaaga YouTube si sax ah. In kasta oo la sameeyay muuqaal tayo sare leh, muuqaal soo jiidasho leh, waxaa laga yaabaa inaysan jirin macaamiil badan dhowrka sano ee ugu horreeya.
Markaad iibsato macaamiisha, waxay kaa caawin doontaa inaad ku dhisto saldhigyadaada wakhti degdeg ah iyo dadaalka ugu yar. Halkii aad ka walwali lahayd tirada macaamiishaada, waxaad diiradda saari kartaa abuurista fiidiyowyo cusub oo soo jiidanaya kuwaas oo soo jiitay daawadayaashaada bartilmaameedka ah.
Sida laga soo xigtay Aherfs, darajada sare ee boggaga raadinta Google iyo YouTube waa mudnaanta ugu sareysa ee suuqgeynayaasha dhijitaalka ah sababtoo ah:
68 boqolkiiba waayo-aragnimada internetka waxay ku bilaabmaan mashiinka raadinta - dadku waxay u badan tahay inay helaan fiidiyoogaaga haddii aad meel sare ka gasho mashiinka raadinta.
Boqolkiiba 75 baadhayaasha Google kama dhaafaan natiijooyinka bogga koowaad, kaliya 0.78 boqolkiiba isticmaalayaasha ayaa riixaya natiijooyinka raadinta bogga labaad
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn karto si aad u xoojiso qiimeynta fiidyaha YouTube ee Google. Kuwaas waxaa ka mid ah helitaanka iyo isticmaalka ereyada muhiimka ah ee saxda ah (kuwa kuwan waa ereyada ay dhageystayaasha bartilmaameedka u isticmaalayaan si ay u raadiyaan waxyaabo la mid ah kaaga), ku darista calaamadaha YouTube, iyo kor u qaadista tayada fiidiyoowga YouTube. Sida ugu dhakhsaha badan, si kastaba ha ahaatee, waa in kor loo qaado tirada macaamiishaada.
Sida laga soo xigtay Neil Patel, YouTube ayaa ku qiimeeyay fiidiyowyada ku saleysan:
Muhiimadda kelmadda muhiimka ah
Kalsoonida waxay markeeda ku xidhan tahay tirada macaamiisha kanaalka YouTube uu leeyahay marka laga reebo aragtida iyo awoodda. Daraasaduhu waxay muujinayaan in tirada jecel, aragtida, faallooyinka, iyo wadaagga fiidyaha YouTube ay si xooggan ula xidhiidho darajooyinka sare ee YouTube. Sababta muhiimka ah ee lagu bixiyo macaamiisheeda YouTube waa inaad kordhiso waxyaabaha la jecel yahay, aragtida, iyo faallooyinka fiidyowgaaga adiga oo helaya macaamiil dhab ah oo badan oo ballaadhinta gaadhistaada.
Kanaalka YouTube ee leh macaamiil badan ayaa helaya meelaynta mudnaanta raadinta Google iyo goobta YouTube. Tirada macaamiishu sidoo kale waa qodob muhiim ah oo algorithms-yada YouTube ay isticmaalaan si ay u kala qiimeeyaan fiidiyowyada. Iyadoo faallooyinka ama jecel yihiin ficillo hal mar ah, is-diiwaangelintu waxay tilmaamaysaa in dadku arki doonaan waxa ku jira fiidyaha ee aad si joogto ah u abuurto. Tani waxay door dhexe ka ciyaartaa ka tarjumaysa qiimaha aad u soo bandhigto YouTube.
Tani waa sababta inta badan YouTubers ay u dhiirigeliyaan is-diiwaangelinta.
Iyadoo aan loo eegin meesha ay ka yimaadaan macaamiishu, haysashada macaamiil badan ayaa kaa caawin doona hagaajinta SEO-gaaga. Tani waxay hubinaysaa in fiidyahaaga la helay oo ay daawadaan saldhig dhegaystayaal oo weyn. Sidaa awgeed, tirada dadka ee fiirsada waxa ku jira, ayaa kor u kaca socodka macaamiisha organic ee kanaalkaaga YouTube.
Weydiinta dadka inay ka tagaan faallooyinka waxay sidoo kale ka shaqayn doontaa sidii kor loogu qaadi lahaa darajada fiidyahaaga YouTube. Dhisidda saldhigga macaamiishaadu waa tallaabada ugu horreysa ee aad ku qaadanayso xeeladahan si aad u sarraysato.
Ka qayb qaado macaamiishaada
Lahaanshaha saldhig macaamiil wanaagsan waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada markaad hadda bilaabayso YouTuber ahaan. Tani waxay sidoo kale khuseysaa kuwa abuurayay fiidiyowyada YouTube in muddo ah laakiin aan awoodin inay dhistaan ​​saldhigga macaamiisha.
Markaad haysato tiro badan oo macaamiisha ah iyo aragtida, waxaad dareemi doontaa dhiirigelin inaad ku darto waxyaabo cusub si joogto ah. Samee fiidiyowyo ku saabsan farshaxankaaga, muusiga, safarka, cuntada, ama xirfadaada si aad uga qaybgasho macaamiishaada dhabta ah.
Waxaad markaa samayn kartaa muuqaal shakhsi ah si aad u soo dhaweyso macaamiishaada dhabta ah oo aad u dareento in la qiimeeyo oo gaar ah. Ku darista calaamad-biyoodka asalka ah ee fiidiyowgaaga kaliya ma ilaalin doonto muuqaalkaaga laakiin waxay awood u siinaysaa daawadayaasha inay gujiyaan oo ay ku biiraan kanaalkaaga. Badhanka isdiiwaangalinta ayaa si toos ah uga soo muuqanaya calaamada biyaha ee asalka ah.
Ka qayb qaadashada macaamiishaada waxay sidoo kale ku lug yeelan doontaa samaynta fiidiyowyo soo jiidanaya danahooda. Waa kuwan qaar ka mid ah tirokoobyada HubSpot oo muujinaya nooca nuxurka ay daawadayaasha YouTube door bidaan:
Fiidiyowyada muusigu waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan YouTube.
Fiidiyowyada wax-ka-iibsiga la xiriira waxay lahaayeen shan jeer saacadaha daawashada ka badan waqtiyadii dhawaa.
YouTube waxay ka dhigtaa 70 boqolkiiba daawadayaasha inay ogaadaan noocyada.
Daawadeyaasha ayaa laba jibaar ugu dhow inay iibsadaan alaab ay ka dageen YouTube.
Marka la barbar dhigo aaladaha kale, daawadayaasha waxay u badan tahay inay ka raadiyaan macluumaadka ku saabsan adeeg, badeecad, ama summada YouTube.
Fiidiyowyada tababbarka ee YouTube-ka waxa ay isticmaalayaasha YouTube ka door bidaan akhrinta buug-gacmeedka ama tilmaamaha.
Sababaha ugu sarreeya ee loo daawado YouTube waa in la dareemo madadaalo iyo nasasho.
Fiidiyowyada nasashada sida goynta saabuunta ayaa 70 boqolkiiba kor u qaaday wakhtiga daawashada.
Fiidyowyada majaajilada ah iyo "sida loo sameeyo" waa qaybaha kale ee caanka ah ee Youtube ka kooban yahay.
Kordhi algorithm YouTube
Algorithm-ka YouTube waa mid gaar ah oo go'aamiya ku dhawaad ​​afar-meelood saddex meelood oo fiidiyowyada daawadayaasha YouTube-ka ay daawadaan. Talooyinka YouTube waxay ku salaysan yihiin cabbirro badan sida macaamiisha, taariikhda daawadayaasha, wakhtiga daawashada, ku habboonaanta, iyo ka qaybgalka. Sababta ugu muhiimsan ee lagu iibsado macaamiishu waa algorithm-ka ay u badan tahay inuu u soo jeediyo fiidyahaaga daawadayaal badan.
Iibka macaamiisha YouTube waa sahlan tahay oo degdeg ah
Haddii aad ka welwelsan tahay dhibaatooyinka helitaanka goobta saxda ah si aad u iibsato subs, halkan waa xalka fudud. YTpals waa goobta hogaaminaysa iibsato macaamiisha YouTube. Waxaad filan kartaa natiijooyin degdeg ah iyo habka wax iibsiga ee la hagaajiyay. Waxaad ku iibsan kartaa 50-ka macmiil ee ugu horreeya YouTube qiimo jaban oo ah $20, halka 5000 ee daawashada lagu qiimeeyaa $60.
Waxa kale oo aad dooran kartaa aragtiyada YouTube-ka bilaashka ah si aad si degdeg ah ula socoto dariiqaaga si aad u dhisto saldhigga macaamiishaada, jecel yahay, faallooyinka, iyo wadaagga.
YTpals sidoo kale waxay leedahay qiime tartan loogu jiro jeceylka YouTube, faallooyinka, saacadaha la daawado, iyo saamiyo kordhin kara istaraatiijiyadaada suuqgeynta YouTube. Markaad bixiso macaamiisha, waxaad bilaabi doontaa inaad ku hesho 24 saacadood gudahood. Markaad markhaati ka noqoto faa'iidooyinka la taaban karo ee kasbashada macaamiisheeda YouTube, waxaad si tartiib tartiib ah u kordhin kartaa tirada macaamiisha ilaa 100, 500, ama ka badan.
Haddii aad rabto inaad iibsato faallooyin, YTpals waxay ku siinaysaa faallooyin gaar ah oo qiimo jaban ah. Waxaad isla markiiba u iibsan kartaa toban faallooyin caado ah fiidyahaaga YouTube-ka oo aad ku soo gelisay qiimo jaban. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa 30 ama 50 faallooyin qiimo tartan ah. Markay timaaddo wax-jeceylka, YTpals waxay bixisaa 200 oo YouTube jecel oo ah $20.
Iibsashada dhamaantood sida xidhmo ahaan waxay ku siin doontaa aasaas adag oo aad u baahan tahay si aad u qaadato kanaalkaaga YouTube heerar cusub oo guul ah.
Eeg waxa ay macaamiisheennu dhahayaan marka ay iibsanayaan macaamiisha YouTube
Macaamiisha YouTube ayaa lagu daray gaadhigaaga.
100 jecel yahay ($ 13.50)200 jecel yahay ($ 20)300 jecel yahay ($ 25)600 jecel yahay ($ 40)1200 jecel yahay ($ 70)2500 jecel yahay ($ 140)5000 jecel yahay ($ 270)10000 jecel yahay ($ 530)15000 jecel yahay ($ 790)20000 jecel yahay ($ 1050)30000 jecel yahay ($ 1550)